वाम गठबन्धनले तयार गरेका विकास योजना यथार्थपरक छन्
Friday, 10 Nov, 2017 4:02 PM
दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र पाँच वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहनुभएका डा. युवराज खतिवडा नेपालमा औंलामा गन्न सकिने मध्येका योजनाविद् र मौद्रिक नीति विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्र तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका डा खतिवडासँग घोषणापत्र मार्फत अघि सारिएका योजना कार्यान्वयनको सम्भाब्यता बारे बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
घोषणापत्रमा १० बर्षमा, २० वर्षमा यति र ३० वर्षमा यति गरिनेछ भनेर खाका दिइएको छ । त्यहाँ भनेझैं सबै सम्भव छ ?
उनीहरुले यहि कुरा पहिले सम्झनै सकेनन् र लेखेनन् । तर जव ओलीले यी कुरालाई काममा बदल्न थाले, बाहिर पो विपक्षीले विरोध गरे । तर, आफ्ना घोषणा पत्रमा त उनीहरुले पनि नक्कल गरे । योजना आयोगका लागि मैले तयार गरेको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आगामी १५ वर्षमा के के गर्नु पर्छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा विकासका सबै परिसूचकहरु अघि सारिएका छन् । तिनै बुँदा राखेर बडो शानका साथ कांग्रेसले घोषणा पत्र बनाएको छ । त्यहाँ तिनै कुरा छन् जुन ओलीले देखेका सपना हुन् । अनि अब पनि अरुलाई हावादारी भन्लान् तिनले ? त्यो आँट बाँकी छ जस्तो लाग्दैन मलाई । बरु के छन् भने कांग्रेसका नीति चाहिँ हावादारी रुपमा आउँछन् । त्यसको चर्चा पछि गरौंला । तर एमालेले या यो वाम गठबन्धनले तयार गरेर ल्याएका देश विकासका योजना यथार्थपरक छन् । र त्यहाँ भनिए भन्दा अघि नै पनि समृद्ध देश बन्न सम्भव छ । तर देशमा पहिले वाम पार्टीको स्थायी सरकार भने जरुरी छ ।
म त्यहि कुरामा आउन लाग्या थिएँ । हेर्नुस है, हामी अहिले १५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छौं । अरु तीन हजार जति माथिल्लो तामाकोसी, अरुण, चमेलिया, लगायतका साना–ठूला परियोजनाबाट निस्कने तयारीमा छन् । थप दुई चारसय मेगावाट बिजुली चाहिँ सौर्य ऊर्जाबाट आउँछ । त्यो काम अहिले नै अघि बढेको छ । त्यसो हुँदा अब हामीलाई १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नलाई ठूल्ठूला १०, १२ वटा परियोजनाहरु चलाए पुग्छ । हाम्रो निजी क्षेत्र त्यहाँ लगानी गर्न तयार छ, वैदेशिक लगानीकर्ताहरु आउन तयार छन् । सरकारले पीपीए बनाउने र ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने त्यति काम हो । कुनै पनि आयोजना पाँच देखि सात वर्षसम्ममा सम्पन्न हुन्छन् । १० हजार मेगावाट बनाउनलाई अहिलेको हिसाव गर्ने हो भने १५ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । विद्युतमा लगानी गर्न एसियाली विकास बैक तयार छ, विश्वबैंक तयार छ, एआइआइबी भन्ने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक तयार छ । हाम्रै बैंकिङ प्रणालीले पनि वर्षको एक खर्व त्यहाँ लगानी गर्न सक्छ । हामीलाई चाहिएको वर्षको पाँच देखि साढे पाँच अर्ब हो । त्यो ठूलो कुरा नै भएन नि । १० वर्षमा १५ खर्ब अर्थात् एक वर्षमा डेढ खर्ब त हो नि । अब पैसाको कुरा गाह्रो भएन । आयोजना छन् गाह्रो भएन । निर्णय समयमा गर्दिने हो भने केही कुराको कमी छैन । हामीले नै गर्छौं भनेर चाहिँ हुँदैन । कहिले क्षेत्रीय त कहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुटाउनु पर्छ । कन्ट्रक्सनको काम जसको क्षमता छ उसलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । अब स्वदेशी नै निर्माण भन्यांै भने समय लाग्छ, कुरा त्यति हो । भुटान जस्तो मुलुकले हजारौं हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसक्यो भने हामी गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन । स्थायित्व, संकल्प र लगानीको मेल हुनु पर्छ । हामीले योजना बनाए भन्दा पनि छिटो हुन सक्छ । अनि त्यसले ल्याउने विकासको वेगले घोषणापत्रको आर्थिक प्रक्षेपण सम्भव मात्र हैन दुईसय प्रतिशत सम्भव छ, ढुक्क हुनुहोस् । हाम्रोमा कहिल्यै काम हुन पाएन । विश्वमा भएका कामको अध्ययन पनि हामीले गर्न पाएनौं र यो असम्भव जस्तो भएको हो ।
केपी ओलीले योजना ल्याउनुअघि विपक्षीले यहि कुरा पहिले सम्झनै सकेनन् र लेखेनन् । तर जव ओलीले यी कुरालाई काममा बदल्न थाले, बाहिर पो विरोध गरे । तर, आफ्ना घोषणा पत्रमा त उनीहरुले पनि नक्कल गरे । योजना आयोगका लागि मैले तयार गरेको प्रतिवेदनमा विकासका सबै परिसूचकहरु अघि सारिएका छन् । तिनै बुँदा राखेर बडो शानका साथ कांग्रेसले घोषणा पत्र बनाएको छ ।
अहिले नेपालमा १० लाख भन्दा पर्यटक आउँछन् । आउँदो दुई वर्ष भित्रमा देश विकासमा जाने बित्तिकै त्यो संख्या २० लाखमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । तव मात्र हामी अर्को १० लाख जनसंख्यालाई रोजगारी दिन सक्छौं । हरेक वर्ष यहाँका पूर्वाधार पनि बन्दै जाने, पर्यटकहरु आउने बाटा र भएका हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गरेर घुम्नलायक बनाउने हो भने हरेक वर्ष, १० वर्ष भित्रमा २०, ३५, ४० हुँदै ५० लाख पर्यटक पुर्याउन सकिन्छ । र यति पर्यटक नेपालमा रहंदा चाहिने स्पट्स होला, होटल, होमस्टे, खाना, स्थानीय उत्पादन, कपडा, कृषिको उत्पादन हरेक क्षेत्रका गरेर अघि हामीले भनेको जनसंख्या सबै रोजगार हुनेछन् । यो गाह्रो होला तर, असम्भव भने छंदैछैन ।
१५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न दुई हजार किलोमिटर रेल्वे बनाउन अथवा त्यति नै लामो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन, त्यसैगरी ६ लेनका वा चार लेनका सडक बनाउन, पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुन १० वर्ष लाग्छ । तर समाजिक कार्यमा त्यत्रो समय लाग्दैन । शिक्षा, स्वाथ्यमा पहँुच पुर्याउन पाँच बर्ष पनि लाग्दैन ।